Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Emirates na-ewebata ụgbọ elu ndị ọzọ na Stockholm
Airlines • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Emirates taa mara ọkwa na ọ ga-ewebata ụgbọ elu atọ ọzọ kwa izu na isi obodo Sweden, na-agbakwunye usoro ihe omume Emirates ugbu a ma na-enye ndị njem nhọrọ ọzọ site na 8th Disemba 2017.
A ga-agbakwunye ụgbọ elu ndị a haziri ọhụrụ iji gboo mkpa na-eto eto maka njem n'okporo ụzọ, ọkachasị n'oge oge oyi. Kemgbe ọ malitere ọrụ ndokwa a na-eme kwa ụbọchị na Septemba 2013, Emirates gara n'ihu na-eto eto maka njem na mbata na mbata. Iwebata ụgbọ elu atọ ndị ọzọ na Fraịde ọ bụla, Satọdee na Sọnde bụ nzaghachi maka mkpa a na-achọwanye.
Flightsgbọ elu ọhụrụ atọ a ga-eme kwa izu ga-eme ka njikọ njikọ njikọta nke ụwa zuru ụwa ọnụ nke Sweden, na-enye ndị njem njem si Stockholm ohere iru ebe 70 Emirates na Asia, Australasia, Africa na Middle East.
Emiratesgbọ elu Emirates ọhụrụ EK155 ga-amalite na 8th Disemba, na-apụ na Dubai na 1500, na-abata na Stockholm Arlanda Airport na 1845. EK156 na-alaghachi azụ ga-apụ ARN na 2110 bịarute na Dubai International Airport na 0630 n'echi ya.
Usoro iheomume nke ụgbọ elu atọ ndị a na-enye njikọ dị mfe n'etiti Stockholm na ọtụtụ ebe ọwụwa anyanwụ East Asia na Africa. Ndị njem nwere ike ijikọ na-enweghị nsogbu ugbu a, na njem dị mkpirikpi site na ọdụ ụgbọ elu Dubai nke ụwa, yana ebe ndị ama ama dị ka Ho Chi Minh City na Vietnam, Colombo na Sri Lanka, Manila na Philippines na Cape Town na Durban na South Africa. Ndị njem ugbu a nwekwara ike ijikọ ụgbọ elu ụgbọ elu nke Emirates na Auckland na New Zealand na oge njem gaa njem Osimiri Indian gụnyere Mauritius, Maldives (Male) na Seychelles (Mahé) na-eritekwa uru site na njikọta ụgbọ elu dị mma.
Oge nke ụgbọ elu ndị ọhụrụ na-emekwa ka Dubai n'onwe ya bụrụ nhọrọ kachasị mma maka ngwụcha izu ụka ma ọ bụ ezumike dị mkpirikpi, oge mbata ụtụtụ na-enye ndị njem si Sweden ụbọchị niile ịmalite ịkụ ezumike ma ọ bụ obere ezumike na UAE
Nakwa inye nhọrọ na mma maka ndị ahịa Swedish ndị na-agagharị na Dubai na gafere maka ọrụ ma ọ bụ oge ezumike, ndị njem na ndị ọrụ ibu nke Emirates na-enwe mmetụta dị mma na njem ndị njem Sweden, azụmahịa, itinye ego na ọrụ. N'ịchọ iwuli elu na onyinye akụ na ụba dị mkpa, Emirates na-enwe nchekwube na ụgbọ elu atọ kwa izu dị n'etiti Dubai na Stockholm ga-ezute mkpa dị ugbu a ma kpalite ọnụọgụ azụmaahịa na ọnụọgụ ndị ọbịa.
Nke ụgbọ elu Boeing 777-300ER na-ewu ewu nke Emirates na-arụ ọrụ na klas atọ, ụgbọ elu ọhụrụ ndị ahụ, dị ka ụgbọ elu a na-eme kwa ụbọchị, ga-enye ndị nwere ụlọ asatọ na klaasị mbụ, na-egosipụta ọnụ ụzọ eji eji akpaka eme ihe maka nzuzo na obere ụlọ mmanya; Ogwe oche iri anọ na atọ na Azụmaahịa na oche 42 sara mbara na Economy.
Ndị njem na-eme njem na klaasị mbụ na azụmaahịa na-enwekwa ohere ezumike kpụ ọkụ n'ọnụ na ọdụ ụgbọ elu Stockholm Arlanda yana Emirates 'na-ekele ọrụ ụgbọ ala Chauffeur na-enyefe ma na-esi n'ọdụ ụgbọ elu gafere na 60km redio.
Dị ka ụgbọ elu Emirates niile, ndị njem na-eme njem na njem atọ ndị ọzọ na-eme kwa izu na Stockholm ga-enwe ike iji ohere nnyefe mmesapụ aka nke ruru 35kg na Economy, 40kg na Business na 50kg na klas mbụ.
N'ime ụgbọ, ndị njem nwere ike ịchọpụta ice Digital Widescreen, na-enye ọwa 2,500 nke egwu ọdịyo na onyonyo gụnyere ihe nkiri kachasị ọhụrụ, ihe ngosi TV, egwu, akwụkwọ ọdịyo na egwuregwu. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọbịbịa ọbịa nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri dị iche iche nke Emirates, yana nri nri mpaghara nke gourmet na-a withụ.
Usoro ụgbọ elu dị ugbu a dị ugbu a: EK 157 na-ahapụ Dubai na 0810 bịarutere na ARN na 1155, ụgbọ elu nlọghachi EK158 na-ahapụ ARN na 1335, na-alaghachi na Dubai na 2255.
Wizz Air CEO Jozsef Varadi: Ndụ taa dị ezigbo ...